Nke a ga-abụ ụfọdụ ọrụ nke Galaxy S7 Edge | Androidsis
Ụnyaahụ anyị kwadoro na A ga -ewepụta ọgbọ ọhụrụ Galaxy S7 na Febụwarị 21 na 20:00 oge Spanish. Ọ bụ ihe nzuzo na onye nrụpụta Korea ga -eweta nke ọhụrụ Samsung Galaxy S7 na Samsung Galaxy S7 Edge.
Galaxy S6 Edge gbanwere ahịa ya na akụkụ akụkụ akụkụ ya gbara okpukpu abụọ, na -enye atụmatụ pụrụ iche. Ọ bụ ezie na ọrụ ndị ahụ adịchaghị iche. Mana ịhụ ọhụụ ọhụrụ nke na -egosi ụfọdụ ọrụ nke akụkụ nke Samsung Galaxy S7 Edge, o doro anya na Samsung arịba ama.
1 Samsung Galaxy S7 Edge na -egosi na webụsaịtị wepụta ya
2 Ma Samsung Galaxy S7 na Samsung Galaxy S7 Edge nwere ike ịnwe oghere kaadị SD ọzọ, yana iguzogide uzuzu na mmiri
Samsung Galaxy S7 Edge na -egosi na webụsaịtị wepụta ya
Ọ bụ ọnụ ụzọ PhoneArena ebipụtala akụkọ ebe ọ na -egosi na Samsung Galaxy S7 Edge na -egosi na webụsaịtị onye nrụpụta. Egosipụtara aha a na ngalaba ndị mmepe nke ibe Samsung Mobile, ebe ha kọwara usoro iji Lee SDK nke ga -enyere gị aka imepụta ngwa dakọtara na akụkụ ihu nke Samsung Galaxy S7 Edge.
N'ime ya anyị nwere ike ịhụ ka Samsung si ekwu okwu, dịka ọmụmaatụ, ụzọ dị iche iche nke ijikọ ozi na ihuenyo ihu site na iji ụdị abụọ: Edge Single na Edge Single gbakwunyere.
Ozi ahụ ga -apụta na ngagharị nke ahụ ga -egosi ozi ndị ọzọ site n'iji tab n'akụkụ. Na nkọwa anyị nwere ike ịhụ na ngwa ọhụrụ ewepụtara site na iji SDK a ga -enwe nkwado maka ụdị sistemụ arụmọrụ Google kachasị ọhụrụ, Android Marshmallow 6.0.
Site n'ihe anyị mụtara, enwere ike iji nhọrọ Edge Single Plus n'ụzọ atọ dị iche ichennweta ngwa ngwa, nlele ngwa ngwa na njikwa ngwa ngwa, na -enye ohere ịhụ ozi ahụ n'ụzọ kawanye abawanye site n'iji ozi ahụ sere taabụ.
Anyị ga -eche ruo ụbọchị Febụwarị 21 iji gosipụta data ndị a, n'agbanyeghị na m hụrụ isi mmalite nke gbapụtara ihe onyonyo a, ejiri m n'aka na ọ dị adị nakwa na ọ ga -abụ otu n'ime ọrụ ọhụrụ nke ga -ejikọ onye ọzọ so n'ezinụlọ Samsung Galaxy S Edge.
Ma Samsung Galaxy S7 na Samsung Galaxy S7 Edge nwere ike ịnwe oghere kaadị SD ọzọ, yana iguzogide uzuzu na mmiri
Maka njirimara teknụzụ ndị ọzọ, a na -atụ anya na ụdị abụọ ahụ nwere ihuenyo 5.1 ruo 5.4 sentimita, a ga -enwe ụdị abụọ nwere ihe nrụpụta dị iche iche: ihe nlereanya nwere SoC. Qualcomm Snapdragon 820 na onye ọzọ ya na ya nọ Samsung Exynos 8990. Ụdị nsụgharị niile ga -enwe Nchekwa 4 GB Ram Ụdị DDR4 gbakwunyere nhazi nchekwa dị n'ime dị iche iche.
Igwefoto ga -abụ otu n'ime ndị na -eme ngagharị ebe Samsung na -etinye isi ike n'akụkụ a, na -ahapụ megapixels n'akụkụ iji lekwasị anya na ịdị mma nke ndị ahụ. N'ụzọ dị otu a, ma Samsung Galaxy S7 na Galaxy S7 Edge ga -enwe igwefoto bụ isi nke otuoghere 13 megapixel nwere teknụzụ BRITECELL.
Ugbu a, ọ dị gị mkpa ịgafe mkpịsị aka gị ka Samsung wee tinye oghere maka kaadị micro Sd ọzọ, otu n'ime isi ihe ma Samsung Galaxy S6 Edge na nke mbụ SAmsung Galaxy S6 katọrọ.
Ọ bụrụ na anyị agbakwunye na nke a karịa asambodo nwere ike ime IP68 nke ahụ ga -enye ndị ọhụrụ nke ezinụlọ Samsung Galaxy S nguzogide uzuzu na mmiri, na -enwe ike imikpu ma Samsung Galaxy S7 Edge na Samsung Galaxy S7 nlereanya ruo otu mita miri emi maka nkeji iri atọ, anyị ga -enwe ihe ọhụrụ. flagship zuru oke, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na nkọwa teknụzụ abụọ a bụ ihe butere ọtụtụ nkatọ sitere na ndị nta akụkọ pụrụ iche.
Kedu ihe ị chere maka mmepe ndị a na Samsung Galaxy S7 Edge? Ị chere na Samsung ga -enwe ike weghachite ahịa furu efu na mmepe ndị a, ọkachasị ma ọ bụrụ na anyị eburu n'uche na o yikarịrị ka Samsung Galaxy S7 na SAmsung Galaxy S7 Edge tinye oghere maka kaadị micro Sd na mgbakwunye iguzogide uzuzu na uzuzu? Mmiri?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Samsung » Functionsfọdụ ọrụ ga-enwe akụkụ nke Samsung Galaxy S7 Edge na-edozi
ZTE karịrị ihe mgbochi nke ngwaọrụ 100 nde rere